Oromada fursadaha waxbarasho ka helay Somaliland - BBC News Somali
Oromada fursadaha waxbarasho ka helay Somaliland
Image caption Qaar kamid ardeyda wax ka dhigata dugsigan
Magaalada Hargaysa ee xarunta Jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbannaanida ee Somaliland waxaa ka furan dugsi ka mid ah kuwa lagu barto xirfadaha gacanta, waxaana si gaar ah wax loogu baraa dumarka qaxootiga ah ee ku nool halkaasi.
Waxaa kamid ah haweenka wax ka barta dugisgaas, hablo kasoo jeeda qowmiyadda Oromada ee dalka Itoobiya iyo gabdho qaxooti ah oo Yemen u dhashay.
Dugsigan oo lagu magacaabo 'Dugisga daryeelka bulshada' ayaa waxaa uu diiradda saaraa xirfadaha gaarka ah oo ay dumarka ku shaqeystaan.
Gabdhaha kasoo jeeda qowmiyadda Oromada ee wax ka barta dugsigan ayaa qaarkood waxay si weyn u yaqaanaan Afsoomaaliga, qaar kamid ah ayaa BBC la hadlay.
Safiya Cabdullaahi Abuu Bakar ayaa waxay sheegtay inay kamid aheyd ardeydii farsamada gacanta ka baraneysay halkaasi balse hadda ay barato xirfadda Cillaan saarka ama xinnaha.
"Aniga Oromo ayaan ahay, Hargeysa ayaan deganahay, hadda waxaan bartaa xirfadda Xinnaha, waxaan ku rajo weynahay in aan ku shaqeysto" ayay tiri Safiya Cabdullaahi.
Image caption Buugaagta ay wax ka bartaan ardeyda
Istaahil Ibraahim Dalbac oo kamid ah macalimiinta ka howlgala dugsigan ayaa BBC u sheegtay in ardeyda ay barto qeybta xirfadda cillaan saarka ama Xinnaha oo ay muddo bil ah bareysay si ay ugu shaqeystaan xirfaddaas.
Waxay sidoo kale sheegtay in hablo badan oo ka aflaxay dugsigan ay ka faa'ideen isla markaasna ay ku maareeyaan noloshooda.
"Anigu waxaan qaabilsan nahay qeybta xirfadda Xinnaha, halkan waxaa lagu baraa gabdhaha xirafado kale sida dawaarka, cunto karinta iyo sidoo kale xirfadda dhismaha guryaha oo ay raggu ku bartaan halkan" ayay tiri Istaahil.
Somaliland waxaa ku nool Oromo badan oo kasoo qaxday dagaallada qowmiyadaha u dhexeeyay ee ka taagnaa dalka Itoobiya, waxayna nolol wanaagsan u raadsadeen halkaasi.
Ciidammada Somaliland ayaa horay u raafay bulshooyinka Oromada ee ku nool halkaas kadib markii ay ku eedeeyeen inay si sharci darro ah kusoo galeen Somaliland.
Qaar kamid a shacabka kasoo qaxay colaadaha ka taagan dalka Yemen ayaa u qaxay dhinaca Somaliland, waxayna ku nool yihiin xeryaha barkacayaasha.
Soomaalida iyo Oromada waxa ay ku wada nool yihiin laba gobol oo xuduud aad u dheer wadaaga ee dalka Itoobiya. Sidoo kale waxay deris ku yihiin nawaaxiga xudduudaha Kenya iyo Itoobiya. Taasi waxaa lagu sheegay mid ka mid ah sababaha ay u soo noqnoqdaan dagaallada mararka qaar dhexmara labada dhinac.
Sidoo kale waxay wadaagaan daaqa iyo ganacsiga, wayna isu kala gudbaan xilliyada abaaraha ay jiraan.